Ndilufumana njani unxibelelwano ngakumbi kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndikufumana njani ukubandakanyeka ngakumbi kwiPinterest?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 319
Kukho amakhulu eendlela ezakwamkela kubuchule bokunxibelelana nePinterest, enye yazo imvume eqinisekileyo yokufaka indawo efanelekileyo ukuya eqongeni njengeencoko nabasebenzisi kunye nokwabelana ngeenjongo ezinikezelwe kubasebenzisi be-Intanethi.
Zininzi izizathu ezilula zokwamkela umxholo wePinterest, ngokuqinisekileyo ziluncedo kuye wonke umntu. Nangona kunjalo, kusekho abanye abantu abangabathandi behlabathi ledijithali kodwa abazi ukuba eqongeni banokufumana iindlela ezininzi fumana izinto ezintsha ezivela kwiiprojekthi.
Ke, ukuba ufuna ukwazi nangakumbi malunga nepini kunye neqonga lebhodi, emva koko unokujonga ulwazi olungezantsi. Enkosi kwezi ntlobo zezinto, kunokwenzeka ukuqala uphendlo olutsha lwezinto ezinokuthwala wonke umntu kwaye ezingqongqo kancinci.
Umxholo wokunxibelelana kwiPinterest wahluke kakhulu kunamanye amaqonga, enyanisweni, izinto ezisetyenziselwa ukutsala umdla kwi-Instagram nakwiFacebook zidlulela ngaphaya kwesicwangciso sexesha. Okwangoku, i Umxholo owabelwana ngawo kwiPinterest iqhutywa kwimodeli engaphelelwa lixesha, ethintela abasebenzisi ukuba bangalibali naluphi na ushicilelo.
Ngenxa yokuba izinto zingaphelelwa lixesha kwiPinterest, kulula ukuba abantu bonwabe yonke imixholo eyomeleleyo kwiziko lomfanekiso. Ngamanye amagama, kulula ukufumanisa ngakumbi ukhetho kunye neeprojekthi iqonga ekufuneka liphucule indlela yokuphila nganye.
Iinjongo zonxibelelwano lwePinterest
Ngokungafaniyo namanye amaqonga onxibelelwano, kubalulekile ukuba uqonde ukuba kwi-Pinterest abantu abahlangani rhoqo. Ngapha koko, banokubonisa kuphela ukuba bayayithanda iposti ngokufaka kwakhona umxholo kunye nokugcina iiposti.
Bonisa umdali ukuba umxholo wabo ulungile
Gcina inkxaso yabasunguli kunye nabayili
Bala ukuba iindlela zonxibelelwano zilungile
Ukuvelisa izimvo kunye neprojekthi kwiqonga
Ke oko kuthetha ukuba ukusebenzisana kwePinterest kunika abadali bemixholo ithuba lokwazi ngalo iindlela ezithile ezilinganiselweyo ezisebenzayo umxholo owabelwana ngawo. Ukuba akunjalo, kuya kufuneka balungise yonke into abayenzayo kwaye bahlele kwakhona izithuba zabo.
Ukuphucula ukusebenzisana kwiPinterest
Ngoku, kuya kufuneka uyazi ukuba ungakwenza njani phucula unxibelelwano kwiPinterest ukufumana ingqalelo yabasebenzisi.
Fumana izikhonkwane ezidumileyo kwaye wabelane ngazo
Ukuba ugcina iikhredithi kwaye wenza iibhodi ekwabelwana ngazo, kunokwenzeka kakhulu ukuba abantu bazokwazi ukubona umxholo onawo engqondweni. Oku kuyakusebenza ukufumanisa ngcono nangakumbi ngabakhangeli abafuna.
Iphayinaphu ngeeyure eziphambili
Usenokungayiboni, kodwa emini zininzi iindlela zokuqinisekisa ukuba abantu bayawubona umxholo wakho. Konke kunjalo ziya kwenziwa ngumxholo owabelana ngawo, ngaphandle kwamathandabuzo uya kuba neziphumo ezingcono kwiyure ethile kunezinye.
1 Unxibelelwano kwiPinterest
1.1 Iinjongo zonxibelelwano lwePinterest
2 Ukuphucula ukusebenzisana kwiPinterest
2.1 Fumana izikhonkwane ezidumileyo kwaye wabelane ngazo
2.2 Iphayinaphu ngeeyure eziphambili
Ndiyongeza njani iwebhusayithi yam kwiakhawunti yam yeshishini lePinterest?
Uyilawula njani iakhawunti yam yeshishini lePinterest?